अनिताजी ढाकाटोपी लाउने सबै भ्रष्टाचारी भए के पूूर्वराष्ट्रपति पनि भ्रष्टाचारी हुुन् त ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
अनिताजी ढाकाटोपी लाउने सबै भ्रष्टाचारी भए के पूूर्वराष्ट्रपति पनि भ्रष्टाचारी हुुन् त ?
टोपी दिवश मनाएको पनि एक हप्ता हुन लाग्यो । अनिताजी मैले तपाइँसँग धोती र टोपीको जुहारी खेल्न खोजेको हैन । तर तपाइँले अझै टोपीको अपमानमा शव्द खर्चिरहेकाले तपाइँलाई हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान टोपीको महत्व बुझाउन मात्र खोजेको हो । यसलाई अन्यथालिनु हुदैन भन्ने पूर्ण विश्वासलिएको छु । केही दिन अघि तपाँइले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको अभिव्यक्तिका सम्वन्धमा बिभिन्न कोणबाट टिका टिप्पणी भइरहेका छन् । तपाइँ जस्तो होनाहार युवतीबाट हतारमा टोपी दिवशबारे गलत टिप्पणी आयो भनेर दुनियाँले व्याख्या गरिसके । यसै सन्दर्भमा म पनि ढिलै भएपनि टोपीदिवसको अभियन्ताको हैसियतले तपाईलाइ केही कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।
सर्वप्रथमतपाइँलाई धन्यवाददिन चाहन्छु नेपालमालगाइने थुप्रै टोपीका बारेमा जानकार राख्नु हुदोरहेछ । त्यसमा पनि तपाइँले टोपी लाउने बानी या संस्कार भन्नु भयो म चाहिँ समाजशास्त्रको विद्यार्थी र मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताभएको व्यक्तिको नाताले संस्कार नै भन्न रुचाउँछु ।
दोश्रो कुरा तपाइँले एउटा महिलाभएर महिलाकै भावनाबुझ्न सक्नु भएनजस्तो लाग्यो मलाई । तपाइँले महिला र पुरुषबीचको सम्वन्धलाई गलत तरिकाले बुझ्नु भयो जस्तो लाग्यो । अनिताजीतपाइँले जसलाई जोकर भन्नु भयो ती महिलाहरु बहुला कुकुरले टोकेर पुष महिनाको ठन्डीमा टोपी लगाएर सडकमा कुदेका हैनन । तिनीहरु आफ्नो नेपालीदाजुभाईको अभियानमा साथ दिन त्यहाँ पुगेका हुन ।त्यो पनिआफ्नै राष्ट्रिय पहिचानको । म तपाइँलाइ प्रश्न गर्न चाहन्छु , के अपराध गरे ती नेपाली चेलीहरुले जसलाई तपाइँले जोकरको संज्ञा दिनु भएको छ ? तपाइँले ती महिला दिदी बहिनीलाई प्रष्ट पार्ने बेलाभएको छ के आधारमा तिनलाई तपाइँले जोकर भन्नु भयो ? तपाइँको विचारमा नेपाली पोषाक लाउने महिला-पुरुष सबै जोकर हुन त ?
अनिताजी तपाई तराइ भुभागमा जन्मेर त्यहिको रहन सहनमा हुर्केकी महिला भएपनि तपाइँ पढेलेखेको हुनुहुन्छ तपाइँले यो समाज र दुनिया अनि हाम्रो संस्कारलाई राम्ररी बुझ्नु भएको छ । फेरि किनगर्नु भयो यस्तो हल्का टिप्पणी ?
म एउटा टोपी दिवसको अभियन्ताभएको कारणले ती दिदीबहिनीलाई यसै पत्रमार्फत बचनदिन चाहन्छु । कुनै दिन उनीहरुले गर्ने कार्यक्रम तपाइले भनेजस्ते गुन्यू चोलीदिवस मनाएभने उनीहरुसँगै गलबन्दी लगाएर भएपनि साथदिनेछौं हामी।
जसले खाइनखाई आफ्नो टिफीन खर्च काटेर केहीथान नेपालको झन्डा र ढाका टोपीकिनेर टोपीदिवसमनाएतीनै राष्ट्रवादी पुरुषले डलर खाएको देख्नु तपाइको दृष्टिदोष हो ।अनिताजी तपाइँले हामी अभियन्तालाई डलर खाएको आरोप लाउनु भएको छ ।
यदि हामीले कतैबाट एक डलर पनि खाएको प्रमाणीत गरेर देखाउनु भयो भने हामी माईतीघर मण्डलामै आत्मदाह गरेर मर्न तयार छौं ।
अनिताजी एक दिन मात्र हैन ३६५ दिन नै टोपीलाउने युवा छन हाम्रो अभियानमा । तसर्थ अपमानजनक शव्द चाहिँ प्रयोग नगरिहालेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि?
मलाई तपाइको सारै चित्त नबुझेको टिप्पणी चाहिँ नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूला पदमा बस्ने भ्रष्टाचारी र राष्ट्रविरोधी टोपीलगाउने वर्गकै छन भन्ने हो । अनिताजी छातीमा हात राखेर भन्नुस्, के ढाकाटोपीलाउने सबै भ्रष्टाचारी हुन त ?
तपाइँले जुन दाबी गर्नुभयो त्यसको सत्यताको लागितपाइँको आफ्नै पिताजीपूर्व राष्ट्रपतिलाई सम्झन आग्रह गर्दछु । पूर्व राष्ट्रपतिप्रति मेरो एकदमै सम्मान छ अन्यथानलगोस । मैले तपाईलाई स्मरण मात्र गराउनचाहेको हुँ। उहाँले आफ्नो कार्यकालमाढाकाटोपी र दौरा सुरुवाललाई यति धेरै सम्मान मात्र दिनु भएन किआफ्नो शरिरबाट नै आलग्याउनु भएन ।
अनिताजी ढाकाटोपी लाउने सबै भ्रष्टाचारी भए के पूूर्वराष्ट्रपति पनि भ्रष्टाचारी हुुन् त ? मैले तपाइँलाई बुझाउनखोजेको यति मात्र हो कि सबै ढाकाटोपीवाला भ्रष्टाचारी हुँदैनन् ।भ्रष्टाचारीले ढाका टोपी वा धोती जे सुकै लगाउन सक्छन् त्यसमा त्यो निर्जीव कपडाको के दोष ?
अनिताजी अन्तमा म तपाइँलाई के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि राष्ट्रमा स्थापित भइसकेको मुल संस्कृतिलाई रक्षा गर्न सकेमा मात्र देशभित्र रहेका अन्य क्षेत्रिय र जातिय पहिचान अनि संंस्कृतिको रक्षा गर्न सकिन्छ ।अन्तमा : हामी टापी दिवशमनाउने समुह भोली यदि कसैले धोती दिवश मनायो वा बक्खु दिवश मनायो भने पनि विरोध गर्दैनौं,आवश्यक परेमा सहयोग गर्न तयार छौं । म टोपी दिवशको अभियन्ताको तर्फबाट तपाइँलाइ बचन दिन चाहन्छु ।
लेखक जागरुक युु्वा अभियान नेपालका सचिव हुुन् ।